DHAGEYSO: NUSOJ oo ka hortimid go’aanka Saxaafadda looga mamnuucay Garoonka Aadan Cadde | Allsomali24.com
DHAGEYSO: NUSOJ oo ka hortimid go’aanka Saxaafadda looga mamnuucay Garoonka Aadan Cadde	Added by Abdifatah Adde on Sep 22, 2016.Saved under SOMALI NEWS, WAREYSIYO, WHAT'S NEW?Tags: Maxamed Ibraahim Macalimuu, NUSOJ	Ururka Suxufiyiinta Qaranka (NUSOJ), ayaa walaac xoogan ka muujiyay amarka ka soo baxay Maamulka Garoonka Aadan Cadde, ee ku aadan in Saxaafadda aysan muddo lixdan cisho geli karin Garoonka.
Maareeyaha Guud ee Maamulka Amniga Garoonka Aadan Cadde, General Cabdi Ashkir Jaamac, ayaa Arbacadii soo saaray warqad digniin ah oo ku wajahan Warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo midda dowladaba. Maareeyaha ayaa warqadda ku sheegay inaysan Suxufiyiinta gudaha u soo geli karin Garoonka, muddo dhan lixdan maalmood, sababo la xiriira arrimo ammni.
Maxamed Ibraahim Macalimuu, Xoghayaha Guud Ururka Suxufiyiinta Qaranka (NUSOJ), ayaa wax aad looga xumaado ku tilmaamay go’aankan, oo caqabad ku noqonaya sida uu yiri shaqadii ay Saxaafadda u haysay shacabka Somaliyeed.
Xoghayaha, ayaa tilmaamay in xilligan uu dalku ku jiro marxalad kala guur ah, loona baahnaa in Wariye-yaashu ay helaan meel kasta oo munaasab ah, isla-markaana uu Garoonka Aadan Cadde ka mid yahay meelaha shaqooyinka culus ay ka socdaan.
Waxaa uu qeexay inaanay iyagu waxba ka ogayn waxa waqtigan ku soo beegay go’aanka Saxaafadda looga joojiyay galaangalkii ay u laheyd Garoonka, balse ay si aad ihi uga dhiidhinayan.
Weriyaha laanta Af Soomaaliga ee VOA-da, Jaamac Buulle Jaamac ayaa Maxamed Ibaraahim Macallimuu, xog-hayaha guud ee Nusoj ka wareystay walaaca xooggan oo ay ka muujiyeen amarkaasi.
Hoos ka dhageyso wareysiga: